यदि वेतन भन्दा पर्याप्त पैसा छैन भने, कुनै बचत गर्न सुरु हुन्छ, र कुनै - आफ्नो खाली समयमा अतिरिक्त आयको लागि विचारहरू हेर्न। काम-कमाई चयन गर्ने मुख्य चीज आफैलाई एक मात्र उद्योगमा सीमित गर्दैन, यो सम्भव छ कि दिमागको प्राविधिक निर्देशनले तपाईंलाई साँच्चै रचनात्मक तरिकामा तपाईंको पैसा कमाउनबाट रोक्न सक्दैन।
गृह आयको विचार
उनीहरूको लागि खराब वेतन होइन जुन एक डिजाइनर डिजाइनर बनाउने - लेखकको बुना भयो कपडाको निर्माण। र आज यो बिल्कुल बिल्कुल जरूरी छैन कि प्रवक्ता मा दिन र रातहरु लाई एक साथ खर्च गर्न को लागि, मुख्य काम एक tandem कम्प्यूटर र मिसिन बुनाई मा गरिनेछ। कम्प्यूटर प्रोग्राम आफैले उत्पादन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्नेछ, यो केवल धागा थप गर्न समय हुनेछ।
खिलौने बिक्री मा बहुतायत को बावजूद अनन्य उत्पादनहरु को उच्च मांग मा छ, र केहि शिल्पकारहरु लाई उनको निर्माण मा धेरै उच्च कौशल प्राप्त गर्दछ। विभिन्न खिलौनेहरू फर, कपडा, माटो र धेरै अन्य सामग्रीबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ। कल्पना लागू गर्दै र साँच्चै अद्वितीय उत्पादनको उत्पादन माहिर गर्दै, तपाईं धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
खराब घर व्यापार छैन - एक मिनी बेकरी। स्वादिष्ट र ताजा पेस्ट्री नजिकैका क्याफेहरूमा मांगमा हुन सक्छ, र घर बेकरी र कन्फेक्शनरी उत्पादनको मूल्य कम छ।
आज धेरै धेरै महिलाहरू म्यानुअल साबुनको प्रयोगमा पूर्णतया स्विच गरिएको छ, जसमा कम्तिमा कम्तिमा कृत्रिम पदार्थहरू छन्। साबुन साबुन बनाउन को लागी एकदम सरल छ, तर अत्यन्तै उत्साहित छ र तपाईले आफ्नो व्यञ्जनहरु लाई विकास गर्दा कल्पना गर्ने एक विशाल क्षेत्र प्रदान गर्दछ।
अतिरिक्त आयका लागि यहाँ केहि विचारहरू छन्:
सफाई वा घर बनाउने;
विवाह सम्बन्धी विवाह र अन्य छुट्टिहरू रिपोर्टिंग मोडमा, जसको लागि तपाईं एक पेशेवर फोटो कलाकारको कलाहरू आवश्यक छैन;
नि: शुल्क वाईफाई सेवा
अडियो रेकर्ड कोडिङ गर्दै;
कन्सर्ट, प्रदर्शन, फुटबल म्याच, आदि को लागि टिकट को बिक्री
"गोपनीय खरीदार" सेवा;
निष्क्रिय आयका लागि विचार
निष्क्रिय आय राम्रो छ किनभने लाभ बनाउन निरन्तर प्रयासहरू आवश्यक छैन। तथापि, निष्क्रिय आयको स्रोत पहिले कमाउनु पर्छ।
निष्क्रिय आय को एक भन्दा साधारण प्रकार को आवास या अन्य अचल सम्पत्ति को भाडा हो। यदि यो व्यक्ति खाली खाली अपार्टमेट, एक छात्रावास कोठा, गेराज, आदि कमाउन चाहन्छ भने यो विधि उपयुक्त हुन्छ। आवास लामो समय वा घण्टापछि भाडामा लिन सकिन्छ र गेराजमा सानो गोदाम व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, मोटर वाहन रबड, जुन कार मालिकहरू प्रायः भण्डारण गर्न सक्दछन्।
निष्क्रिय आय प्राप्त गर्ने एउटा राम्रो मौका इन्टरनेट दिनुहुन्छ। ठूलो संख्याका आगन्तुकहरूसँग एक मुड़िएको साइटले विज्ञापनको स्थानबाट महत्वपूर्ण राजस्व ल्याउन सक्छ। तथापि, तपाईंले पैसा प्राप्त गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंलाई साइट पूरा गर्नको लागि कडा मेहनत गर्नु आवश्यक छ।
नयाँ वर्षको लागि आयको लागि विचार
नयाँ वर्षको लागि पैसा कमाउने अवसरको उल्लेख गर्दा अधिकांश मानिसहरू मात्र सान्ता क्लॉज वा हिम फेदरीको रूपमा काम गर्ने विकल्प मात्र मानिन्छ। यो, निस्सन्देह, पनि एक राम्रो तरिका हो, यद्यपि यसको कार्यान्वयन कलात्मक डेटाको उपलब्धता चाहिन्छ। तर पैसा कमाउने अन्य तरिकाहरू छन्।
नयाँ वर्षको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय सेवाहरू एक टैक्सी हो। उत्सवको समयमा मात्र काम गरिसकेपछि, तपाईं आफ्नो जेबमा ठूलो रकम राख्न सक्नुहुन्छ। यस अवधिमा आदेशहरू धेरै छन्, र मूल्यहरु पारंपरिक रूपमा बढ्दै छन्।
नयाँ वर्ष अघि, उत्सव स्मृति चिन्ह राम्रो तरिकाले बेचेको छ, विशेष गरी आगामी वर्षको प्रतीकहरू। स्मृति चिन्ह र बिक्रीको बिन्दुको खोजी अग्रिममा उपस्थित हुन वांछनीय छ, त्यसपछि त्यो उत्सव रात्रिमा तपाईंले परिवार र साथीहरूलाई उपहारको लागि राम्रो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु र वयस्कों को लागि कार्निवल वेशभूषा को लागि पर्याप्त मांग पनि प्रयोग गरिन्छ, एक क्रिसमसको पेड को सजावट।
एक मोडेल कसरी गर्ने?
कुक कसरी गर्ने?
कसरी राम्रो नेता बन्न सक्छ?
भर्ती एजेन्सी कसरी खोल्ने?
न्यूनतम निवेश संग व्यापार
पुस्तकको समीक्षा "ड्रीमिंग हानिकारक छैन" (बारबरा चेर)
पर्दाका लागि कुनासहरू कसरी छनौट गर्ने?
आटा किन सपना देख्छ?
पनीर संग लुगाफाल
आफ्नै हातमा आन्तरिक आर्किटेसन
उनको हातले तिल्डाको गुड़िया
पर्ल बैले राम्रो र खराब छ
न्याय के हो र न्याय कसरी प्राप्त गर्ने?
8 ताराहरू, जसले हामीलाई 2017 मा नयाँ कालखण्डहरूमा आश्चर्यचकित गर्यो
टेलर स्विफ्टले गर्भवती फ्यानको घर किन्यो
तपाईंको हातले कपडाबाट मुर्गाको अनुप्रयोग
बच्चाले आफ्नो खुट्टामा आफ्ना खुट्टाहरू थिच्छन्
स्नानघरमा टाइल कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
बिरुवाको लागि मिट्टीलाई कसरी रद्द गर्ने?
फैशनेबल टोपी - जाडो 2013-2014
Nettle - स्त्री रोग मा उपयोगी गुण
छाला क्लच - सबैभन्दा फैशनेबल र स्टाइलिश मोडेल
उनको जन्मदिनको पोप कसरी बधाई छ?
शरद ऋतु 2013 शरद ऋतुमा